साईबर क्राईम र लागूऔषध विरुद्ध अभिमुखीकरण कार्यक्रम — donnews.com
'इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु ह्वात्तै बढ्दै गएको र जानेर वा नजानेर साईबर क्राईम गर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि'
लमजुङ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरुलाई साईबर क्राईम र लागूऔषध विरुद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
लमजुङ प्रहरीले बेसीशहर नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको यशोब्रह्म माध्यमिक विद्यालयका ६० जना बालबालिकालाई साईबर क्राईम र लागूऔषधका विरुद्धमा जानकारीमूलक तथ्यहरुसहित जानकारी दिएको थियो ।
कार्यक्रममा साईबर क्राईमका प्रकृतिहरु, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, लागूऔषध भनेको के हो ? दुव्र्यसनमा कसरी फसिन्छ ? यसका लक्षणहरु के के हुन् ? यसबाट बच्ने उपाय के हो ? र दुव्र्यसनीको परिणाम र क्षति लगायतका बारेमा जानकारी गराईएको थियो । त्यसो त लमजुङ प्रहरीले लागूऔषधको मुद्दामा समातिएका व्यक्तिहरु र तिनका अभिभावकलाई समेत अभिमूखीकरण तालिम प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
कोभिड १९ का कारण यस्ता कार्यक्रम लामो समय स्थगित भएको र अब फेरि कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रहरी नायव उपरिक्षक गंगा थापाले जानकारी दिनुभयो । विशेष गरी विद्यालयतहबाट नै बालबालिकाहरु लागूऔषधमा फस्ने गरेका कारण उनीहरुलाई समयमा नै सचेत बनाउन र लागूऔषधबाट टाढा राख्न यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको प्रहरी नायव उपरिक्षक थापाले जोड दिनुभयो ।
अहिलेको सयममा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु ह्वात्तै बढ्दै गएको र जानेर वा नजानेर साईबर क्राईम गर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको प्रहरी नायव उपरिक्षक थापाको भनाई छ । पछिल्लो एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नक्कली आईडि खोलेर फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वास्ट एप लगायतका एप्सहरुबाट दोस्रो व्यक्तिलाई सताउने गरेका उजुरीहरु प्रहरीमा धेरै दर्ता हुने गरेको छ ।